Kuratidza zvinyorwa neelebheri Dvoračky
Dvoracky (Hofbaude muchiGerman) inzvimbo yemakomo muGiant Mountain, iri panzvimbo yakakwirira yegumi nemakumi mapfumbamwe nemashanu pamawere ekumaodzanyemba kweLysa hora. Dvoračky inzvimbo yekare kwazvo, yakatanga muna 1140 nemhuri yekwaSchier seimba yepurazi yemakomo ekurima zvipfuyo mune akakomberedza makomo. Izita rekutanga raive Rokytenské dvorské boudy. MunaKurume 1707 imba yekutanga yakatsva uye iyo nzvimbo yakatsva yakatengwa neCount Harrach uye yakavakwa zvakare mune yaiwanzoshanyirwa imba yekutandarira. MunaFebruary 1893 wechinomwe weCzech Skiing Championship yakaitika pano. Muna 1902, kugadzirisirwa ivhu kwakapfuura mumaoko ehurumende uye ndokurendeswa kumhuri yeCzech Puhonny, iyo yakazozvitenga. Kubva 1921, izvo zvinonzi zvinyararire zvigadzirwa zvakatanga kushandiswa mumakomo eKrkonoše, kusanganisira mhando yeDvoračky. Bhuku rekuyeuka rinoratidza vashanyi vashoma, vakadai saMutungamiri Dr. Edvard Beneš nemukadzi wake Hana, avo vaida makomo eKrkonoše uye vakapedza nguva yavo yekuzorora muDvoracky pamberi pehondo muna 1923.